Ny Minisitra dia nanome toky fa hanohana sy hanara-maso bebe kokoa ireo nahazo diplaoma Shannon
Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao Mafana » Seychelles Madagascar Malgache » Ny Minisitra dia nanome toky fa hanohana sy hanara-maso bebe kokoa ireo nahazo diplaoma Shannon
Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • fanabeazana • Vaovaom-panjakana • Hospitality Industry • Vaovao • Seychelles Madagascar Malgache • Tourism • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Travel Wire News
Fiantohana ny fandaharan'asa fandraisana vahiny mahafeno ny tanjony
Ny Minisitry ny Raharaham-bahiny sy ny Fizahantany Sylvestre Radegonde dia nanome toky ny Komitin'ny Mpitarika azo itokisana kokoa hiaraka amin'ireo nahazo diplaoman'ny Shannon College mba hahazoana antoka fa ny fandaharan'asa fampiantranoana dia mahafeno ny tanjony amin'ny tanora Seychelles tanora mitana toerana eo amin'ny fitantanana sy fitantanana eo amin'ny toeram-pitsangatsanganana any Seychelles. tsy nahavita.
Ny fanambarana dia natao tamin'ny fihaonana tamin'ny vondrona faharoa Shannon 25 nahazo diplaoma natao tao amin'ny Botanical House ny alakamisy 18 Novambra, mba handrenesana mivantana ny antony mbola latsaky ny 50% amin'ireo nahazo diplaoma amin'ny fandaharana dia ao amin'ny indostrian'ny fandraisana vahiny na ny sehatry ny fizahantany ary vitsy amin’ireo sisa no mitana toeran’ny mpitantana. Naneho hevitra fa na dia tsy resy aza i Seychelles amin'ny maha-firenena azy rehefa miala amin'ny sehatry ny fampiantranoana ny mpianatra iray, dia nilaza ny minisitra fa tsy izany no tanjon'ny fandaharana izay atahorana tsy ho tratra.
Seychellois 90 no nahazo diplaoma hatramin'ny efa-taona amin'ny programa fitantanana fandraisana vahiny izay ahitana telo taona ao amin'ny Fizahan-tany Seychelles Akademia ary herintaona farany tao amin'ny Shannon College any Irlandy hatramin'ny nidiran'ny mpianatra voalohany tao amin'ny andrim-panjakana irlandey tamin'ny 2012. Naneho ny faniriany handre avy amin'ireo nahazo diplaoma ny traikefany teo amin'ny toeram-piasana, ny fanamby natrehin'izy ireo, ny nanelingelina azy ireo ny Minisitra ary nanery azy ireo hiala. ny indostria ary koa ny fandrenesana ny soso-kevitr'izy ireo momba ny vahaolana mety hamerenana ity toe-javatra ity.
Ireo nahazo diplaoma dia nanasongadina ny tsy fahampian'ny fahafahana fampandrosoana sy ny fanaraha-maso ny fandaharam-piofanana, tsy ara-dalàna na tsy misy fivoriana manokana miaraka amin'ny mpanara-maso sy ny fitantanana mba hanaraha-maso ny fivoarana sy hamantarana ny fanatsarana sy ny tsy fahampian'ny fandraisana anjara avy amin'ny mpanoro hevitra sy ny Minisiteran'ny asa. . Amin'ireo izay mbola eo amin'ny sehatry ny indostria, maro no miaraka amin'ny fananana Hilton, orinasa iray nisongadina tamin'ny fanarahana ny fandaharam-pampianarana momba ny fitantanana.
Ireo nahazo diplaoma dia nizara ho nomena tombontsoa ho an'ny mpiasa vahiny rehefa tonga ny fotoana fisondrotana, ny mpanara-maso Seychellois dia mihevitra azy ireo ho fandrahonana amin'ny fandrosoany manokana, ary mbola ao anatin'ny fonosana fidirana aorian'ny asa an-taonany maro. Ny hafa dia niresaka momba ny tsy fisian'ny drafitra fanofanana, ny fandavana ny fahafahana mivoatra ary tsy voaomana ho amin'ny fitantanana, mandroaka azy ireo hiala sy hiasa amin'ny sehatra hafa, anisan'izany ny jono, ny fiantohana, ary ny fiarovana ny mpanjifa, ankoatra ny hafa, na dia eo aza ny fitiavany ny indostria.
Ny sasany mbola nandalo fiofanana naharitra sy fiofanana momba ny fitantanana ny fanerena amin'ny antsipiriany nentin'ny ANHRD ho azy ireo sy ny fianakaviany. miverina any Seychelles avy hatrany dia avela ho amin'ny fitaovany tsy misy asa rehefa miverina.
Nisy nahazo diplaoma vitsivitsy nanamarika ny tantaran'ny fahombiazana, mamporisika ny hafa fa tsy ampy ny mitodika, fa ny manolo-tena sy mifantoka ary mirehareha amin'ny asany, hanohana ny soatoavina Shannon mba hananana asa mahafa-po amin'ny indostria.
Rehefa avy nandre ny kaontin'ireo nahazo diplaoma ny Minisitra dia nidera ireo nahazo diplaoma tamin'ny zava-bitany ary naneho hevitra fa ny fiofanana mandritra ny efa-taona dia dingana lehibe alohan'ny hizarana ny drafitra ho an'ny ho avy mba hahazoana antoka fa ny programa dia mahatratra ny tanjony amin'ny fananana isan-jaton'ny Seychellois avo kokoa. amin'ny toerana fitantanana.
Mba hanaovana izany, nanambara ny minisitra fa hanangana komity mpanoro hevitra azo itokisana kokoa izy, izay hambara aorian'ny fihaonany amin'ny vondrona fahatelo sy farany amin'ireo nahazo diplaoma Shannon. "Tianay ny hanova tanteraka ny fomba fiasan'ny programa fanofanana, fanofanana ary fanaraha-maso amin'ny hotely," hoy ny minisitra Radegonde. “Tsy milaza izahay fa misy amin’ireo mpanoro hevitra no tsy matotra, fa maro no mijery ny tombontsoany manokana. Mety manana ny olony tiany hihazona an'ireo toerana ireo izy ireo na ny filozofian'ny orinasany dia mety mitaky ny hanaovan'ny vahiny an'ireo toerana fitantanana ireo. Noho izany dia tsy maintsy ovainay izany mba hametrahana olona ao amin'ity komity ity izay tena hiara-miasa aminao sy ny mpiara-miasa aminao mba hahazoana antoka fa hahatratra ny haavon'ny fahaizanao ianao. Tsy afaka manova lahatsoratra tanjona ianao rehefa mandeha. Hanana drafitra fanofanana mazava, drafitry ny fifandimbiasana, ary hanendry olona mba hiantohana ny fanaraha-maso sy fampiharana izany. Hanara-maso ny asan'ity komity ity izahay sy ny zava-mitranga ao amin'ny orinasa iasanao mba hahazoana antoka fa mijanona ho marin-toetra amin'ny fanoloran-tenany izy ireo. Ny fivorian'ny fandrosoana tsirairay indray mandeha isam-bolana no kely indrindra. Mbola hisy fivoriana indray miaraka amin’ireo nahazo diplaoma ary avy eo dia hanambara ny firafitry ny komity Mpanolo-tsaina sy ny drafitr’asa ataonay izahay”, hoy izy.
Nandrisika ireo nahazo diplaoma mba haharitra, hoy ny minisitra Radegonde: “Te-hampahery anareo aho, hilaza aminareo hoe aza kivy. Ireo izay niala, izay nandray asa teo amin’ny sehatra iray izay mahasambatra azy, ny sasany efa nanorina orinasa manokana na naka fianarana hafa, Mirary soa. Tsy maintsy faly manao izay tianao hatao ianao. Fa ho anareo izay mieritreritra ny hiala dia tiako ny milaza aminareo fa aza kivy dieny izao, mahareta, fa hamboarintsika ny zavatra. Nampanantena politika misokatra ho an’ny sampan-draharahan’ny fizahantany ny tenany ka nanamafy fa misokatra hatrany ny sampan-draharahan’ny fizahantany amin’ny tolo-kevitra avy amin’ireo nahazo diplaoma. “Malalaka ihany koa ny manatona anay amin’ireo olana azonay ampiana”, hoy ny minisitra.
Nisaotra an’ireo nahazo diplaoma tamin’ny fanokanana fotoana tamin’ilay fivoriana, ny sekretera lohan’ny fizahantany, Sherin Francis, dia nidera azy ireo noho ny zava-bitany tamin’ny fahavitan’izy ireo diplaoma tamin’ny taranja efa-taona tena sarotra sy noho ny fomba fijery voalanjalanja nasehony. “Tianay ny hevitrao sy ny soso-kevitrao mba hanohizana ny fandaharana sy hitondra ny tena dikan'ny teny hoe mpanoro hevitra. Mila mamantatra ny banga sy ny tanjaka ary ny fahalemena isika. Mbola hisy ny fitakiana vahiny amin’ny toeran’ny mpitantana – na izany aza, tokony hisy ny isan-jato ambony kokoa aminareo amin’ny toeran’ny mpitantana”, hoy i PS Francis namarana.